I-Artificial Intelligence (AI) nomlando: Kufuneka abakhuluma isiZulu – The Ulwazi Programme
Siza ukwakha umlando! Siyadinga ukuthi usize ukuhlola umlando waseNingizimu Afrika. Enye yezingqinamba lapho kufundwa umlando waseNingizimu Afrika ukuthi abawuhumushayo banama-akhawunti ahlukene omlando kuvame ukuba umuntu oyedwa kodwa esebenzise amagama ahlukene . Ukunquma ukuthi igama elithile libhekiswe kubani kunamathuba amaningi okuqonda kangcono umlando waseNingizimu Afrika. Kungasiza ekwenza ucwaningo ngomlando wangaphambi kwekholoniyali (pre-colonial) kanye nokwehlukaniswa kombuso ngamakholoni (decolonialism).
Iphrojekthi yocwaningo lweComputer Science, e-UCT ihlola ukusebenza kwe-Artificial Intelligence (AI) ekutholeni ukuthi igama libhekiswe kubani. Loluhlelo luzohlola ngokuqhathanisa amagama alo emiphumela kakhulu abhalwe ngumuntu. Lesi yisicelo samavolontiya ukuba achaze imibhalo ngokukhomba amagama futhi awaxhumanise nabantu abafanele. Ucwaningo kufanele luthathe cishe imizuzu engu-45 kuya ehoreni ukuluphothula, yize ababambiqhaza bengacubungula eminye imibhalo uma befuna. Ababambiqhaza bazokhokhelwa ngokuya ngenombolo yama-links futhi kufanele bathole cishe u-R55 ngehora.
Owazi kahle isiZulu.
Oneminyaka engaphezu kuka-18.
Inombolo yeselula yaseNingizimu Afrika ukuze ukhokhelwe.
Kumele ubenekhompyutha, ifoni, ithebhulethi noma ilaptop ukuqedela ucwaningo.
Iwebhusayithi yakhelwe ukwakha ukuxhumana phakathi kwamagama nabantu. Ukubamba iqhaza kulolu ncwaningp, sicela uye ku-https://annotator.weblathe.net/ bese wenza i-akhawunti. Ukubamba kwakho iqhaza kungokuzithandela ngokuphelele futhi ungakhetha ukuyeka ucwaningo nganoma yisiphi isikhathi ngaphambi kokuyithumela.